I-China Heat Pipe Air Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | Dongfang
Izinzuzo ze-Heat Pipe Air Preheater 1. Igesi ye-Flue nomoya kubuyele emuva ukugeleza okuqonde phezulu ukuze kwakheke ukushintshana komoya okushisa komoya, okuthuthukisa kakhulu izinga lokushiswa komoya obhemayo. 2. I-preheater yomoya wethu wepayipi uqukethe ibhokisi, isigaxa samapayipi okushisa kanye nepuleti yedummy ephakathi. Kuthatha izinzuzo zesivinini sokudlulisa ukushisa okusheshayo kanye nokusebenza kahle kokudluliselwa kokushisa ukushisa ukunqoba inkinga yesilinganiso sokudlulisa okushisa okuphansi. 3. Indawo yangaphandle yokudlulisa ukushisa yodonga yomugqa womabili wepayipi lokushisa isebenzisa amaphiko ukunwebeka, ...
Izinzuzo ze-Heat Pipe Air Preheater
1. I-Flue igesi nomoya kubuyele emuva ukugeleza okuqonde phezulu ukuze kwakhiwe ukushintshisana komoya okushisa komoya, okuthuthukisa kakhulu izinga lokushiswa komusi nomoya.
2. I-preheater yomoya wethu wepayipi uqukethe ibhokisi, isigaxa samapayipi okushisa kanye nepuleti yedummy ephakathi. Kuthatha izinzuzo zesivinini sokudlulisa ukushisa okusheshayo kanye nokusebenza kahle kokudluliselwa kokushisa ukushisa ukunqoba inkinga yesilinganiso sokudlulisa okushisa okuphansi.
3. Indawo yokudlulisa udonga lokushisa yangaphandle yomugqa womabili wepayipi lokushisa isebenzisa ama-fins ukunweba, ngakho-ke kuqinisa ukudluliswa kokushisa kwepayipi kwangaphandle, kunciphisa ngempumelelo ivolumu, isisindo, kanye nokonga insimbi okusetshenziswayo.
4. I-preheater yomoya onamaphayiphu isetshenziselwa i-boiler ukukhuphula izinga lokushisa komoya ngaphakathi. Izinga lokushisa lomoya elikhulayo lilungele ukushiswa kwamafutha omlilo, ngaleyo ndlela likhuphula izinga lokushisa lomlilo futhi kunciphise ukusetshenziswa kawoyela ngokulandelana. Lokhu kuqinisa ukusebenza kahle kwe-boiler kube ngaphezulu kwama-70%.
Ukusebenza kwe-Heat PipeAir Preheater
1. Ukufakwa okulula: asikho isidingo sokushintsha i-boiler noma i-oven yezimboni.
2. Ukwethembeka komhlangano: kusetshenziswa ipulethi yedummy ephakathi ukuze umkhuhlane obandayo nokushisa uhlukaniswe ngokuphelele komunye nomunye. Ipayipi elilodwa lokushisa elonakalisiwe ngeke lithinte i-preheater yomoya nokusebenza kahle kokudluliselwa kokushisa.
3. Umthamo omncane: ngesakhiwo esicwebile kanye nomphumela wokudlulisa ukushisa okuphezulu, izinhlangothi ezibandayo nezishisayo zepayipi lokushisa zisebenzisa amaphiko okufaka umoya ukukhulisa indawo engaphezulu njengoba kudingeka.
4. Ukumelana kwe-Corrosion, uthuli oluncane: amandla okudlulisa wepayipi lokushisa angaguqulwa ukuze alawule ukushisa kwe-tube tube futhi kuvikele ukuvela kwe-acid dew-point.
5. Impilo yenkonzo ende: i-preheater yomoya wokushisa wepayipi inempilo yeminyaka engaphezu kwengu-10, ngokulungiswa okulula kanye nezindleko eziphansi.
Ngaphambilini: Isiguquli Tube
Olandelayo: I-Flue Damper
ICopper Tube Heat Exchanger
I-Cast -iron Finned Air Preheater
I-Double Tube Plate Condenser
Chill Water Machine , Rail Transit , Ironworks , Heater Ukubika Inkinga YeWindows Isigaba , Ukunciphisa Block , sesitimela Consulting ,